Izinwele kanye Nobumfihlo, Ukungena ngaphakathi noma Isipiliyoni Somsebenzisi? | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJuni 12, i-2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Njalo emavikini ambalwa ngivakashela indawo yangakithi Ama-Supercuts. Angitholi ukusikwa okuhle ngaso sonke isikhathi, kepha akubizi futhi abantu abasebenza lapho bahle impela. Okubaluleke kakhulu, nokho, ukuthi uSupercuts ukhumbula ukuthi ngingubani. Lapho ngingena, bacela igama lami nenombolo yocingo, bayifaka ohlelweni lwabo, bese bethola inothi ukuthi kunesikhathi esingakanani kusukela ngigunde izinwele zami zokugcina nokuthi ngiyithanda kanjani , emi ingxenye).
Ukusebenzisa imininingwane (eyimfihlo) engikunikezile kwenza ulwazi lwami lomsebenzisi ngamaSupercuts kube ngcono futhi kungigcina ngibuya. Umqondo onentshisekelo, huh? Ngiyakuthanda ukuya ezindaweni lapho bekhumbula khona igama lami, ukuthi ngiyithanda kanjani ikhofi lami, ukuthi ngiwathanda kanjani amahembe ami afakwe izinkanyezi, noma ukuthi ngithanda kanjani ukugunda izinwele zami! Ngibuya ngiphindelela ngoba isipiliyoni singcono kakhulu. Ngihlale kwamanye amahhotela amahle lapho ngamangala khona lapho i-concierge ikwenza iphuzu lokukhumbula igama lami. Yiwo lowo mzamo omncane ongigcina ngibuya futhi ngandisa ibhizinisi lami. Izinkampani eziqoqa futhi zisebenzise idatha zombili ziphumelele futhi ziyaziswa.
Amathuluzi wami, amasayithi, nemikhuba yami eku-inthanethi akufanele yehluke, akunjalo? Ngithumela imininingwane… kwesinye isikhathi imininingwane yomuntu siqu… kumasayithi naku-inthanethi ukuze ngithuthukise ulwazi lwami ngabo. Amazon ilandelela ukuthengwa kwami ​​bese itusa izinto ezingeziwe engingaba nentshisekelo kuzo. Uma ngiya kubhulogi enhle, i-Google Adwords ehambisana nokuqukethwe ingangikhomba kumkhiqizo noma insizakalo engiyithandayo. Uma ngiphawula kokunye komngane indawo yami, imininingwane yami ingagcinwa ku-Cookie ngakho-ke iyavela ngakho-ke akudingeki ukuthi ngigcwalise imininingwane futhi. Lokhu kumnandi! Kungongela isikhathi futhi kungitholela imiphumela engcono. Akukhona yini lokho konke okukhulunywa ngakho?
Iqiniso lokuthi yonke into oyenzayo ne-chunk yedatha oyifaka ku-Intanethi ingasetshenziselwa ukuthuthukisa ulwazi lwakho lomsebenzisi Fantastic, hhayi inkinga. Imininingwane iqoqwa ngokuzithandela, kunjalo. Akudingeki wamukele amakhukhi, ungene ngemvume kumawebhusayithi, usebenzise amanye, noma uxhume kwi-Intanethi nakancane. Kimi, ubumfihlo akuyona inkinga nhlobo, ukuphepha kuyinkinga. Inqubomgomo Yamazwe Ngamazwe isanda kulandela ukuthi iGoogle ibanikeze izilinganiso ezimbi kunazo zonke ezake zaba 'yimfihlo'. Ngenkathi ngifunda lesi sihloko, ngacabanga ukuthi yinto engenanhle ukwenziwa. Ukuqoqwa kwemininingwane yeGoogle kwenzelwa ukwakha isipiliyoni esingcono sabasebenzisi bayo kanye nokuxhuma ibhizinisi kubathengi.
I-Googler edumile, UMatt Cutts uphendule i-Privacy International ngempendulo eningiliziwe engicabanga ukuthi ibethelwe ngempela. IGoogle yenza umsebenzi omangazayo ngokuphepha - ugcine nini ukuzwa ngemininingwane eyimfihlo egqekezwa noma ekhishwe ngengozi kwaGoogle?
I-Google ayithengisi idatha kunoma ngubani, imodeli yabo ukuvumela amabhizinisi ukuthi afinyelele kusistimu yawo, abathengi bayifinyelele, futhi i-Google ibaxhuma bobabili. Leyo yindlela enhle futhi engiyithandayo. Ngifuna ukuthi iGoogle ifunde okuningi ngami ukuthi ulwazi lwami lokusebenzisa isoftware luba ngcono nsuku zonke. Ngifuna ukufinyelela ezinkampanini abazincomayo kimi - abangaba nomkhiqizo noma izinsizakalo engingaba nentshisekelo kuzo.
Ngabe i-Privacy International ibeka kanjani ama-Supercuts alandelela ukuthi ngivakashela kangaki, angobani amalungu omndeni wami, nokuthi yiziphi izintandokazi zezinwele zethu? Ngicabanga ukuthi bafuna iSupercuts iyeke ukuqoqa leyo mininingwane. Kuzodingeka ukuthi ngichaze njalo uma ngivakashela… ngize ngime ngithole omunye umuntu wenza Landela.
Ngicabanga ukuthi iqiniso ukuthi lezi… izinkampani lezo ukuhlukunyezwa idatha yakho kufanele igwenywe, kepha izinkampani lokho ukusetshenziswa idatha yakho kufanele iklonyeliswe. Ungayeki ukungilandela, Google! Ngithanda isipiliyoni somsebenzisi osinikezayo.
I-Clicky WordPress Plugin ene-Admin ekhishwe
Jun 12, 2007 ku-3: 39 PM
PS. Akudingeki ngenze lutho ngaphandle kokuthayipha lo mlayezo… ..b / c imibono yakho isivele iyangazi kwikhompyutha yami yokusebenza KANYE nakwi-laptop yami. Leyo yinto enhle kakhulu …… futhi ingenza ngizizwe ngibalulekile.
Jun 12, 2007 ku-4: 30 PM
Wena kukhona kubalulekile! 🙂